Dear Mya Lwar
Could you please explain me about your favorite five poems/stories in your blog.
If you have time reply me please your explaination.
"Can Laugh Forever"
မြလွှာရဲ့ အကိုဆရာက မြလွှာရဲ့ Blog မှာ တင်ထားတဲ့ Post လေးတွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး.... ပုံပြင်သဘောမျိုး (၅)ခုရေးပေးပါလို့ ....မြလွှာရဲ့ အိမ်လေးမှာ လာအော်ပါတယ်.....
မြလွှာတင်ထားတဲ့ ပိုစ်လေးတွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး...မြလွှာ ပထမ အကြိုက်ဆုံးကတော့.....
(၁) မိသားစု ထမင်းဝိုင်းလေး......ပါပဲ.....
မြလွှာ ...ဒီပိုစ်လေးပို ရေးဖြစ်တာက သိပ်မထူးဆန်းပါဘူး....... အိမ်မှာ တနေကုန်မနေရတဲ့ သူတစ်ယောက်..... အိမ်စောင့်နတ်ကတောင် နှင်ထားသလားအောင့်မေ့ရတဲ့သူ..... မိသားစုနဲ့ အချိန်ပြည့် မနေရတဲ့ သူတစ်ယောက်ဟာ..... မိသားစု အားလုံးစုံနေတဲ့ အချိန်မှာ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ခံစားမှု ၊ ပြီးတော့ မြလွှာ နားလည်ထားတဲ့ မိဘနဲ့ သားသမီးကြားက ဆက်ဆံမှု..... နားလည်မှု.... အဲဒါတွေကို မြလွှာ ခံစားမိလိုက်တဲ့အတွက်..... မြလွှာလိုပဲ... အိမ်နဲ့ ခွဲနေရတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ..... အိမ်နဲ့ ဝေးနေတဲ့ သူတွေ....... အိမ်မှာ အချိန်ပြည့် မရှိနိုင်တဲ့ သူတွေ......... အတွက် မြလွှာ ခံစားမိတာလေးကို မျှဝေပေးလိုက်တာပါ....
မြလွှာ ဒုတိယ အကြိုက်ဆုံး ပို့စ်လေးပါပဲ... မြလွှာမှာ မကောင်းတဲ့ အကျင့်လို့ပဲ ပြောရမလား... ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အမူအရာလို့ပဲ ဆိုရမလား.. မြလွှာ အင်မတန် စိတ်ကောက်တတ်တယ်ရှင့်... တစ်ချို့တွေက ပြောကြတယ်.... တနင်္ဂနွေမှာ မွေးဖွားတဲ့ သူတွေက စိတ်ကောက်ရင် ကောက်... စိတ်မကောက်ရင်... ဆံပင်ကောက်တတ်တယ်တဲ့လေ... မြလွှာက တနင်္ဂနွေ နေ့မှာ မွေးဖွားလာတဲ့ သူပါ... မြလွှာမှာ ကမွေးခထဲ က ဆံပင်က လုံးဝမကောက်ဘူးလေ..... အဲဒါကြောင့်ပဲလားတော့ မသိပါဘူးရှင်... မြလွှာ စိတ်အင်မတန်ကောက်တတ်တယ်..... စိတ်ကောက်တာဟာ တစ်ချို့က ပြောတော့ ကလေးဆန်တယ်တဲ့လေ.... တစ်ချို့ကလည်း.. အားအားရှိ စိတ်ကောက် နေတော့ တစ်မျိုးတွေမြင်လာတော့တာပေါ့နော်...... ဒါပေမယ့် မြလွှာစိတ်ကောက်တာကတော့ လူတိုင်းကို မဟုတ်ပါဘူး.... မြလွှာချစ်တဲ့ ခင်တဲ့ သူတွေကိုမှ စိတ်ကောက်တာရှင့်..... မြလွှာက လူတိုင်းကိုလည်း မချစ်တတ်ပါဘူး... မြလွှာ ချစ်တဲ့သူတွေဆိုရင်.... မြလွှာ စိတ်အင်မတန် ကောက်တတ်တယ်. .... ကိုယ့်ကို ချစ်မှ ကြိုက်တယ်... မြလွှာချစ်တဲ့သူဆီက ချစ်ဆိုတဲ့ အရာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အားလုံးရချင်တယ်.... အတ္တကြီးတာပေါ့နော်.... နောက်ဆုံး.. ခဲတံနဲ့ ချစ်တာက အစ..ကိုယ်ပဲ ဖြစ်ချင်တယ်.... မြလွှာ တစ်နေ့တော့ မြလွှာ ရဲ့ ရုံးက အမကြီးနဲ့ စိတ်ကောက်ပါလေရော.... သူ့ဆိုရင်မြလွှာက အမြဲ စိတ်ကောက်နေကြလေ.... ခါတိုင်းဆိုရင်.... မြလွှာ စိတ်ကောက်ရင် သူကအမြဲ ချော့နေကြလေ..... အဲဒီနေ့က သူက လာပြီးမချော့ဘူး... မြလွှာအရမ်းဝမ်းနည်းတာပဲ... သူ့ကိုခေါ်ချင်လို့ လမ်းကို ဟိုလျှောက်ပြ ဒီလျှောက်ပြ လုပ်တာလည်း.. မခေါ်ဘူး.... နောက်ဆုံး မြလွှာ ငိုမှ သူက လာခေါ်တယ်..... အဲဒါနဲ့ မြလွှာလည်း နောက်နေ့ .မြလွှာ စိတ်ကောက်လွန်းလို့ မြလွှာကိုယ် မြလွှာ သတိပေးတဲ့ အနေနဲ့ တင်လိုက်မိတဲ့ Post လေးပါပဲ... မြလွှာရဲ့ သူငယ်ချင်းလေးတွေ မြလွှာစိတ်ကောက်ရင်.. သည်းခံပေးရမယ်နော်... :)
မြလွှာ ဒါလေးကိုရေးဖြစ်တာကတော့ သိပ်မဆန်းပါဘူး... စိတ်တွေဆိုးရင်..ဒေါသတွေဖြစ်ရင်... အင်မတန် ပူလောင်ပါတယ်... လူတစ်ဦးမှာက အပူတွေက မျိုးစုံပဲလေ.... လူတစ်ဦးပူမှု ရယ်တဲ့ ဆယ်ကုဋေ ဆိုလား.... ပြီးတော့ စိတ်တိုရင်.. အင်မတန်အမှား ပါတတ်ပါတယ်.... အမှားဆိုတာက ပြင်လို့ ရတဲ့ အမှားဆိုရင်...တော်သေး... မြလွှာတို့တွေ ပြင်လို့ မရတဲ့ အမှားတွေ ကျူးလွန်မိပြီ ဆိုရင်တော့..... ခက်ပြီပေါ့... အဲဒီ တော့ အမှားတွေနည်းနိုင်တော့မှာပေါ့နော်.... စိတ်ဆိုးတော့မယ်..ဆိုရင်...စိတ်တိုတော့မယ်ဆိုရင်... အချိန်များများစားစားစောင့်စရာ မလိုပါဘူးရှင်... ၃မိနစ်လောက်လေးပဲ ...စောင့်ရမှာပါ... .
မြလွှာရဲ့ အမေအပေါ်မှာ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်.... အမေတွေဟာ ဘ၀မှာ ဘယ်လောက်အရေးပါ အရောရောက်တယ်ဆိုတာ.... တန်ဖိုးကြီးလှတဲ့...တန်ဖိုးထိုက်တန်လှတဲ့ အမေ အိမ်မှာ ရှိစဉ်မှာတော့... မသိပဲဘဲ.... ကွယ်ပျောက်သွားမှ သိလာရပုံကို ဆိုလိုထားတဲ့ ကဗျာလေးပါပဲ..... မြလွှာ အမေကို သိပ်ချစ်တာရှင့်...မြလွှာရဲ့မေမေကလည်း...မြလွှာဆိုချစ်မှချစ်ပဲ.... အကြီးဆုံးဖြစ်ပေမယ့်...မြလွှာက အငယ်လိုနေတာလေ..... အဲဒါတွေကို ခံစားမိပြီး မြလွှာ ရေးဖြစ်သွားတာပါ....
မြလွှာတို့ရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့ အရာတွေ... အကျင့်တွေ.... စရိုက်တွေ.... အဲဒါတွေကို မြလွှာတို့တွေ အချိန်တွေကုန်ခံပြီး နေဖို့ မလိုကြောင်း..... အရေးကြီးတာက မြလွှာတို့မှာ ရှိနေတဲ့ စိတ်လေး...ထားတတ်ဖို့လိုကြောင်း.... မြလွှာ မြည်းစမ်းကြည့်လိုက်မိသလို... မြလွှာရဲ့ သူငယ်ချင်းလေးတွေကိုလည်း... အရသာကောင်းလေးကို မြည်းစမ်းကြည့်စေချင်တဲ့ အတွက်.... ရေးဖြစ်သွားတဲ့ Post လေးပါပဲ....
မြလွှာဖြေလိုက်ပြီနော်...... အားလုံးကို.... ဆရာပြောသလို မြလွှာ အမြဲတမ်းပဲ ပြုံးနေချင်ပါတယ်... အဟီး.... :P:)
~~~ကမ္ဘာကျော်တွေတောင် မှီနိုင်ဘူးကွာ....~~
Posted by myalwaryone at 2:51 PM
ဘယ်လောက်ဝေးဝေး... နီးနီးလေး....(သတိရတိုင်း အနားမှာ...
မြလွှာရဲ့ Tag အဖြေ..............